Roma oo afar qaad ku raadinaysa Gregoire Defrel – Gool FM
Roma oo afar qaad ku raadinaysa Gregoire Defrel
Raage November 12, 2016
(Roma) 12 Okt 2016 – Kooxda AS Roma ayaa soo arkatay qannaaska Sassuolo ee Gregoire Defrel si uu ugu bedelo Mohamed Salah inta lagu jiro Koobka Qaramada Afrika ee Africa Cup of Nations, balse waa inay huraan €15.5m.
Kooxda Giallorossi ayay haatan meel wanaagsan wax u marayaanm waxaana wax badan oo bandhigga kooxda ee wanaagsan ugu wacan xiddigga reer Masar ee Salah.
Yeelkeede, wuxuu maqnaan doonaa ilaa 6 todobaad inta uu ku maqan yahay waajibaadka qaran ee Africa Cup of Nations oo socon doona bilasha Jannaayo iyo Febraayo.
Sida uu dhigayo warsidaha Il Resto del Carlino, waxay kooxda caasimaddu beddel wanaagsan u aragtaa 25-jirka reer Faransiis ee kooxda Sassuolo ee Defrel oo ah laacib waaya aragnimo tira badan u leh horyaalka Talyaaniga oo uu muddo ka ciyaarayay.
Atletico Madrid oo ka walwalsan in Antoine Griezmann uu seego Derby Madrid
GOOGOOSKA: Nigeria vs Algeria 3-1 (Nigeria oo Algeria naafaysay)